février 2021 – Madatopinfo
AMBATOVY : Hamokatra nickel sy cobalt 3 000 taonina mandritra ny volana marsa
Ity volana marsa ity no miverina amin-kery tsikelikely ny orinasa Ambatovy, araka ny tafan’ny tomponandraikitry ny seraserany tamin’ny mpanao gazety, teny amin’ny birao fiasany tetsy Ankorondrano. Nambara nandritra izany, ny
TOBY RATSIMANDRAVA: Tontosa ny dinikasa niarahan’ireo mpisehatra amin’ny fandriampahalemana
Nifarana ny zoma 26 febroary ny fivoriana fanao isaky ny 3 volana teo amin’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarmariam-pirenena, ny polisim-pirenena, ny tafika, ny atitany sy ny fitsarana izay notanterahana
Isan’ireo olana iray mahatonga ny fahalotoan’ny tontolo iainana ny fisian’ny fako mivangongo sy miparitaka etsy sy eroa sy. Paikady goavana iray hialana amin’izany ny fanodidina ny fako ho lasa angovo
FIKAMBANANA MPIARA-MAMAKY NY BAIBOLY: Hankalaza ny jobily faha-50 taona amin’ity 2021 ity
« Jobily ho anareo izany taona fahadimam-polo taona izany; dia nandroso ny Tenin’Andriamanitra ary nihamaro indrindra ny isan’ny mpianatra tany Jerosalema » Lev 25:11 – Asa 6:7 no teny faneva hoentin’ny Fikambanana
VOVONANA IFI: « Tsy hivadi-belirano amin’ny Filoha Rajoelina izahay »
Nisesisesy tamin’ity herinandro ity ireo karazana fanambarana notanterahan’ireo antoko poilitika, olom-boafidy, fikambanana sy vovonana samy hafa mikasika ny fahitana ny
ONIVERSITE FJKM RAVELOJAONA: Manana sampam-piofanana 9 azon’ny mpianatra hisafidianana
Maro amin’ny tanora no sahiran-tsaina amin’ny fitadiavana fianarana aorian’ny nahazoana bakalorea. Misy ny hetsika « Salon de l’étudiant – spécial rentrée
Eny amin’ny Lapan’ny tanora sy ny fanatanjahantena indray no hifamotoana ireo sekoly ambony sy ny mpianatra manana bakalorea noho mihoatra
CAFE THE-MATIQUE: Nahasarika tanora maro ny fifanankalozan-kevitra momba ny « Trading »
Hetsika iray ahafahan’ny tanora mifanakalo hevitra amin’ny matihanina ny Café Thé-matique an’ny oniversite tsy miankina ESTIIM’. Miovaova isaky ny Café
ADY AMIN’NY COVID-19: Hentitra ny fanaraha-maso eny amin’ny Boriborintany fahaefatra
Tsikaritra tato anatin’ny herinandro nisesisesy izay fa niverina nihamaro indray ny isan’ny olona mitondra ny valan’aretina Covid-19 eto amin’ny Faritra
FILOHA LEFITRY NY CFM: Manao antso avo amin’ny malagasy rehetra handala ny soatoavina
Manana anjara toerana lehibe eto amin’ny firenena ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy na ny CFM. Noho izany dia tsy mitsahatra